यस्तो छ तयारी राउटेहरुको दशैंका लागि ! – Everest Dainik – News from Nepal
यस्तो छ तयारी राउटेहरुको दशैंका लागि !
सुर्खेत, असोज २८ ।
नेपालीको महान् चाड दशैंको स्वागतका लागि गाउँ–शहरमा मात्र होइन, जङ्गलका राउटे समुदायसमेत भव्य तयारीमा जुटेका छन् ।
मुखिया सूर्यनारायण शाहीले ईश्वरबाटै श्रृष्टि चलिरहेकाले पनि चाडपर्वप्रति विश्वास रहेको बताए । ‘शिकार परेन भने देउता रिसाएको बुझ्छौँ, उनले भने, ‘त्यही भएर शिकारका देवता भुयाँ र दारेमष्टोको पूजा गर्छाैं ।’ लोकपाटीबाट